Global Voices teny Malagasy » Teknika Lingua : Efa tonga ny fahafahana manana mpanoratra maro anaty lahatsoratra iray! · Global Voices teny Malagasy » Print
Teknika Lingua : Efa tonga ny fahafahana manana mpanoratra maro anaty lahatsoratra iray!
Voadika ny 11 Jona 2019 3:00 GMT 1	 · Mpanoratra Jer Clarke Nandika avylavitra
Sokajy: Dika, Blaogim-Piarahamonina GV, efitrano famoahambaovao, gv-torolàlana, lingua
(Fanamarihana : Lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Desambra 2015)
Arahaba ry GV! Araka ny nampanantenaiko tao anatin'ny lahatsoratro farany mikasika ireo fanavaozana ato amin'ny Lingua , androany isika dia hanomboka handefa singa miavaka iray vaovao ho an'ny GV manontolo: Ny safidy ahafahana mametraka olona mihoatra ny iray ho mpandray anjara anaty lahatsoratra iray!
Azonareo atao ny mametraka olona maro araka izay tianareo ho “mpanoratra” ao anaty lahatsoratra iray, ao amin'ny faritra Author anatin'ny post editor.
Ho aseho daholo izy rehetra, ery amin'ny tsivalan'ny lohahevitra sy ny fanambanin'ny lahatsoratra ilazana ireo nandray anjara.
Ho asehon'ny lahatsoratra any amin'ny pejy mombamomba ny mpanoratra manokana rehetra ihany koa.
Ho asehon'ny lahatsoratra ihany koa any amin'ny mombamomba an-dry zareo any amin'ireo tranonkala hafa  izay misy dika avy amin'ilay lahatsoratra.
Nohavaoziko ny Torolalana momba ny famoahana  eto amin'ny tranonkalan'ny vondrom-piarahamonina, nasiana taridàlana momba ny fampiasàna azy io. Tena tsotra kely saingy ho ampidiriko etsy ambany ihany mba tsy handany andro anareo 🙂
Iangaviako mba ho ampahafantarina ahy raha misy tsy mety hitanareo amin'ilay rafitra vaovao, na raha misy manana fanontaniana!
Taridàlana momba ny famoahana GV -> Mpanoratra maro anaty lahatsoratra iray
Efa mipetraka mialoha ho an'ny WordPress ny fizakàna fotsiny mpamorona iray isaky ny lahatsoratra, fa ho an'ny Global Voices ny rafitra fandikàna ato amin'ny Lingua dia manana ny safidy Additional contributors eo amin'ireo lahatsorany, izy rehetra ireo dia hisoratra daholo ho tompony ary ho hita any amin'ny pejy mombamomba an-dry zareo ilay lahatsoratra voatanisa.
Anjaranareo ny mifidy hoe iza ireo mpandray anjara ho “mpiara-manoratra” amin'ilay lahatsoratra, fa mora ny mikira azy ireny: Tadiavo ny faritra Authors ery amin'ny tsivalan'ny lohahevitra amin'ny post editor dia potsiro ny +Add New mba hanampiana faritra iray faharoa fametrahana lisitry ny mpanoratra. Safidio izay mpanoratra faharoa, avereno arakaraky ny ilàna azy ary avy eo tehirizo amin'ìizay ny lahatsoratrareo. Raha hanala mpandray anjara dia potsiro ilay x eo akaikin'ny anarany.
Fanamarihana: Mitovy daholo ny fanehoana ireo rehetra “mpandray anjara” ao anatin'ilay lahatsoratra, na io hoe “nosoratan'i” na “nadikan'ì”, miainga avy amin'ilay lahatsoratra izay nametrahana ny momba azy ireo tao anatin'ilay faritra fametrahana ny mpanoratra. Raha orizinaly (tokamiavaka) ilay lahatsoratra dia hiseho toy izao ry zareo “nosoratan'i”, ary raha asa fandikàna no natao, ho aseho tahaka izao “nadikan'i”. Araka izany raha misy olona tianareo ho aseho hoe “nosoratan'i” dia tsy maintsy ampidirinareo ao amin'ilay lahatsoratra orizinaly ry zareo, na dia tao amin'ny asa fandikàna aza ry zareo no nanao ny fanoratany. Mety tsy hisy mihitsy aminareo io, saingy ataovy an-tsaina ihany sao mety ho hitanareo tsy mivoaka araka ny tokony ho izay ao anatin'ny lahatsoratra ireo mpandray anjara avy ivelany tao aminareo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/11/140143/
 anatin'ny lahatsoratro farany mikasika ireo fanavaozana ato amin'ny Lingua: https://community.globalvoices.org/2015/11/lingua-tech-all-your-posts-on-all-your-sites/
 Torolalana momba ny famoahana: https://community.globalvoices.org/guide/technical-guides/gv-posting-guide/